Tempoly anaty Rova - Hiavaka ny fanamarihana ny faha 150 taona niorenany
Publié juillet 23, 2019 par Book News
Hifanesy handalo eny amin’ny tempoly anaty Rova ireo Fiangonana samihafa eto Madagasikara.
Fankalazana ny faha 150 taonan’ny Tempoly anaty Rova
Nosokafana tamin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana­ ny asabotsy 20 jolay teo ny fankalazana ny faha 150 taonan’ny Tempoly anaty Rova.
Tao amin’ity Tempoly ity no nanambaran’ny Mpanjaka tamin’izany vanim-potoana izany, Ranavalona II, fa i Jesosy Kristy no Mpanjakan’i Madagasikara. Nikatona kosa io Fiangonana io taorian’izay. Nisy fotoana nandalovana tamin’ny fahasahiranana.
Nosakanan’ireo mpitondra nifandimby ny fanaovana fotoam-pivavahana tao amin’ity Tempoly anaty Rova Manjakamiadana ity.
« Amin’izao anefa dia nomen’ny Fanjakana Malagasy alalana hosokafana hanaovana fotoam-pivavahana ity Tempoly anaty Rova ity », hoy i Aimons Rakotomamonjy, mpikambana ao amin’ny Komity mpikarakara ny fanamarihana ny faha 150 taona ny Tempoly anaty Rova.
Aimons Rakotomamonjy, mpikambana ao amin’ny Komity mpikarakara ny fanamarihana ny faha 150 taona ny Tempoly anaty Rova. cc: Toria Dimbiniaina
Hampiakarina ao an-dapa avokoa ireo Fiangonana
Najoro vonjimaika ny Komity fankalazana ny faha 150 taona nisian’ny Tempoly anaty Rova, izay hiarahan’ny fianakaviana isan-karazany, ny fianakavian’ny Mpanjaka Ranavalona II.
« Mbola handalo hifanesy ao amin’ity Tempoly ity ireo Fiangonana zokiny, ny fiombonan’ny Fiangonana zandriny, ny taranaka andriana miray. Mbola ho avy ao ihany koa ireo olom-boafidy », hoy hatrany i Aimons Rakotomamonjy.